I-35 YEYONA NDODA ILUNGILEYO YEENWELE (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Isitayile seBun Bun
Nokuba uyayithanda okanye uyayicaphukela, indoda ibun yenye yezona zinwele zamadoda zidumileyo kule minyaka idlulileyo. Imvelaphi yento ethandwayo yendoda yenwele…
Nokuba uyayithanda okanye uyayicaphukela, indoda ibun yenye yezona zinwele zamadoda zidumileyo kule minyaka idlulileyo. Imvelaphi yendoda ethandwayo yenwele ayinazinwele, kodwa ubukhulu becala iihipsters zinokubongwa ngokunyuka kwayo. Inwele yendoda inezinto ezininzi ezahlukileyo, kubandakanya ne-bun bun fade, man bun undercut okanye ngamacala achetyiweyo. Abafana banokhetho lokuyilungisa indoda yabo ibe liqhina elingaphezulu okanye bayidibanise nentshebe ukuze bajongeke.
Ukuba uneenwele ezinde okanye uceba ukukhulisa iinwele zakho, izitayile zethu zomntu zinokuba sisisombululo esifanelekileyo. Ngezantsi, uya kufunda indlela yokwenza kwaye ubophe i-bun man. Nazi ezona zibalaseleyo ze-man bun hairstyle imibono yamadoda.
1Yintoni Indoda Yendoda?
MbiniIndoda eyiBun vs.
3Uyifumana njani iBun yendoda
4Uyifumana njani kwaye uyenze njani isitayile sendoda
5Uyigcina njani indoda eyiBun
6Uyifumana njani iNqaku eliPhezulu
7Uyenza njani isitayile iNqaku eliPhezulu
8Amadoda apholileyo eBun kunye neeNwele eziPhezulu zeKnot
Yintoni Indoda Yendoda?
Igama ngokwalo linokudideka kwamanye amadoda- iyintoni na indoda ebhinqileyo ngokuchanekileyo kwaye yahluke njani kunamaqhina aphezulu? Njengoko igama lisitsho, iinwele zeenwele zeenwele ziinwele nje eziqokelelweyo ukwenza ibhan ejikelezileyo ngasemva kwentloko.
Kukho iiyantlukwano ezininzi kule iinwele ezipholileyo zamadoda, ezinje nge-bun epheleleyo, ibun ephantsi, i-bun yesiqingatha kunye ne-under man man. Abafana banokufumana indoda ende okanye emfutshane.
Unako kwakhona ukudibanisa indoda bun kunye iindevu ukuba indoda eyimboni ngamaplanga jonga ukuba vogue ngoku.
imifanekiso yamadoda amnyama iinwele
Ukuba ujonge ukukhulisa i-bun man kodwa ufuna ukurhabaxa, kunzima ukukhangela iinwele zakho ezinde, ke le ndlela inokuba lukhetho olufanelekileyo kuwe.
Indoda eyiBun vs.
Ngelixa ibhanti yendoda kunye neqhina elingaphezulu linokubonakala lifana neliso elingaqeqeshwanga, kukho umahluko ophambili nangona kunjalo. Iqhina elingaphezulu lenziwe ngaphezulu kwentloko kwaye libotshelelwe ukwenza ukubonakala kwamaqhina. Awudingi iinwele ezininzi ukubopha iqhina elingaphezulu, kwaye amacala ayachetywa ngesikhumba esiphakamileyo okanye aphungulwe mfutshane njenge-undercut.
Kwelinye icala, indoda ibun ihlala ixhomeke ezantsi kwaye itsale iinwele ukusuka phezulu, ezantsi nasemacaleni. Ekugqibeleni, indoda iinwele zeenwele zibandakanya iinwele ezinde ngokulinganayo kuwo onke amacala.
Uyifumana njani iBun yendoda
Ukufumana i-bun man, kuya kufuneka ukhule iinwele zakho. Abafana baya kufuna ubuncinci i-intshi ezi-6 zobude beenwele kwindoda esisiseko. Nantoni na emfutshane kunaleyo phantse ayinakwenzeka ukubopha, nangona unganakho ukubopha iqhina eliphezulu de ube ukhule ngokwaneleyo iinwele zebun.
Nangona kunjalo, kwizinwele ezinde zendoda, kuya kufuneka ukhule iinwele zakho ubuncinci i-8 ukuya kwi-intshi ye-10 ubude. Ukukhulisa iinwele zakho ixesha elide kungathatha iinyanga ezininzi, ngakumbi ukuba uqala ukusika okufutshane.
Ukuba uqala kwizinwele ezimfutshane zamadoda kwaye ufuna ukunqanda ukujonga ukungabi nanto, cela umchebi wakho akunike nokuba usike ukuze iinwele zakho zikhule ngokulingana macala onke. Indoda encinci ye-fade ephantsi inokuba sisiqalo esihle, kwaye ungawabetha amacala kwaye ubuyele kwisitayile esidumileyo kodwa esidumileyo.
amadoda aneenwele ezinde ezinde
Iyahluka kwaye ishushu, indoda bun fade kulula ukuyifumana kwaye kulula ukuyibeka. Nokuba ufuna i-low, mid, high, bald, okanye taper fade with man bun hairstyle on top, kukho iindlela ezininzi zokuzama!
Uyifumana njani kwaye uyenze njani isitayile sendoda
Ukubeka iinwele zakho kwindoda ye-bun, ngakumbi okokuqala, kuya kufuneka ucwangcise ngokubanzi apho ufuna ukuyenza khona. Uninzi lweenwele ze-bun, oku kunokuba kwisithsaba sentloko okanye kufutshane nomqolo ongasemva.
Ukwenza i-bun, uya kufuna ukuqala ngokuxubha zonke iinwele zakho kwesinye isandla sakho. Qiniseka ukuba ufumana naziphi na iinwele ezilahlekileyo phezulu, ecaleni nasemva; Ngaphandle koko, unokushiya iinwele ezithile ezingakhange zibonakale zingafuneki.
Ngelixa ubambe le fistist yeenwele, bamba iqhina leenwele okanye ibhanti ngesandla sakho sasimahla kwaye uyidlulise kwizinwele zakho kabini. Indlela elungileyo yokwenza oku ngaphandle kokuphulukana neenwele zakho kukubamba ibhendi kufutshane nengcambu kwaye emva koko udlulise iinwele zakho kuyo.
amadoda amdaka ngeenwele ezimdaka
Kwipasi yesibini, yima phakathi, ubangele ukuba iinwele zakho ziphindaphindwe kabini nangaphezulu. Ngestayile esiqinileyo, ungazidlulisa iinwele okwesibini kwaye uyeke isiqingatha kwindawo yesithathu. Ngalo msongwana kweenwele zakho, usandul 'ukubopha kwaye wenze ibun yendoda.
Kuya kuthatha uvavanyo ukuze ubone ukuba yeyiphi indawo ngasemva kwentloko yakho esebenza kakuhle kwibhanti yendoda, kodwa kuninzi lwabantu, kuncinci okanye kancinci kunesithsaba yindawo elungileyo.
Uyigcina njani indoda eyiBun
Ngelixa ukufumana iinwele ze-man bun kunokuba lula, ukugcina isitayile ngokuqinisekileyo kuyabandakanyeka ngakumbi. Ngenxa yokuba iinwele ezinde zinokuqala ukubonakala zinamafutha ngokukhawuleza okukhulu, kubalulekile ukuba uhlambe iinwele zakho yonke imihla ukuze ugcine amaqhaga akho amade ekhangeleka esempilweni. Kwaye ukuba udlala i-man bun neendevu, ngokuqinisekileyo uya kufuna ukukhathalela iinwele zakho zobuso ngeoyile yeendevu.
Ukuba une-scalp eyomileyo, ungasebenzisa ishampu eyomileyo kabini ngeveki kunye ne-shampoo yesiqhelo kanye ngeveki. I-shampoo eyomileyo ayiphangi isikhumba sakho seoyile yendalo, ngaloo ndlela igcina iinwele zakho zikhazimla kwaye zikhazimla.
Kubantu abanesikhumba se-scalp esinamafutha, ukuhlamba ishampu ngolunye usuku kuyimfuneko yokuphepha iingxaki zokukhathalela iinwele. Kwaye ungalibali imeko ethobekileyo yeenwele ezigudileyo.
Okokugqibela, abafana kufuneka bahlale bephepha ukubopha iinwele zabo ngokuqinileyo. Oku kunokukhokelela ekuqalekeni kwempandla yamadoda.
Uyifumana njani iNqaku eliPhezulu
Njengoko besitshilo ngaphambilana, iinwele ezingaphezulu ezinamaqhina emadodeni yinto nje yokubhanqa kwendoda ene-twist. Umzekelo, iqhina elingaphezulu lenziwe ngebhinyana encinci yeenwele kwaye yenziwa ngaphezulu komqolo wentloko endaweni yesithsaba okanye ezantsi.
Ngapha koko, abafana abadingi zinwele zingako ngeqhina eliphezulu, zisenza ukuba kube lula ukufikelela kuso. Ngapha koko, unokukhetha ukufumana iqhina eliphezulu okwexeshana njengoko iinwele zakho zikhula kwaye usendleleni eya kwisitayile sendoda.
iinwele zokuncipha kweenwele
Okokugqibela, ukwenza iqhina eliphezulu, uyakufuna ukusika kwesikhumba esingaphantsi okanye okuphezulu kwesikhumba ngasemva nasemacaleni entloko. Lo mahluko uyinxalenye ebalulekileyo yeenwele eziphezulu zokucheba iinwele.
Uyenza njani isitayile iNqaku eliPhezulu
Ukwenza isitayile seqhina eliphezulu, kufuneka ubophe iinwele zakho njengeqhina njengoko ubunokwenza njengebhan yendoda, ngaphandle kokuba iqhina kufuneka libe ngaphezulu kwentloko yakho. Ukulandela amanyathelo afanayo esiwachazile ngaphambili, hlanganisa zonke iinwele zakho kwisandla esinye kwaye uzibophe ngebhanti okanye iqhina leenwele.
Unokuba neqhina elisezantsi-embindini ukuze ujongeke kancinci, okanye ngaphezulu ngaphezulu kwentloko yakho ngenwele yesamurai. Nokuba yeyiphi na indlela, isiphumo liqhina elincinane leenwele elinde lide kwaye lishinyene kunamacala aphelileyo.
amadoda iinwele ezinde ezinamaza
Amadoda apholileyo eBun kunye neeNwele eziPhezulu zeKnot
Ukuba ufuna ezinye iinguqulelo zokuyila kunye nenkuthazo, i-man bun kunye ne-knot ephezulu yeenwele zibonelela ngeendlela ezininzi. Ukukunceda ukuba uze neenwele ezona zilungileyo zamadoda, siqulunqe iindlela ezahlukeneyo ezinokubonakala kunye neembonakalo, kubandakanya ibun yendoda kunye neendevu. Ke kwixesha elizayo xa undwendwela indawo ekucheba kuyo iinwele okanye isitayile sokuloba, uya kuba nomfanekiso wokubonisa umchebi wakho kanye le nto uyifunayo.
intsingiselo yetshathi ye-synastry
tattoos ingalo ephezulu yamadoda
ukugcinwa kweenwele eziphantsi amadoda
fumana uphawu lwam lwenyanga
iinwele zenkwenkwe encinci emnyama